ခမျြးသာကွှယျဝလာနိုငျတဲ့ လက်ခဏာမြား... - SANTHITSA
သငျ့ရဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျ၊ အရပျအမောငျး၊ ဆံပငျအရောငျကိုကွညျ့ပွီး တဈခြိနျခြိနျမှာ ခမျြးသာလာနိုငျမလား ခနျ့မှနျလို့ ရမယျဆိုရငျ အနာဂတျကို ကွိုသိခငျြပါသလား။
ဟုတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျကို ကွညျ့ရုံနဲ့ ခမျြးသာလာမှာလားဆိုတာ မပွောနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လူတဈယောကျရဲ့ အကငျြ့စရိုကျကို ကွညျ့ရငျတော့ ခမျြးသာလာမလားဆိုတာ သိရနိုငျပါတယျ။ အလုပျကို ကွိုးကွိုးစားစားလုပျတတျသူတှေ၊ ရညျရှယျခကျြကွီးသူတှနေဲ့ ပှငျ့လငျးတဲ့ စိတျသဘောထားရှိသူတှဟော အောငျမွငျနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကို အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျတဲ့ အခွားလက်ခဏာ လေးခုရှိပါတယျ။ သငျ့မှာ ဒီလက်ခဏာလေးခုရှိတယျဆိုရငျ တဈနမှေ့ာ ခမျြးသာလာဖို့ ခိုငျလုံတဲ့အခှငျ့အရေးရှိပါတယျ။ ဒီလက်ခဏာတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ လလေ့ာကွညျ့ပါ။
လက်ခဏာ (၁) – ငယျငယျကတညျးက လုပျငနျးရှငျစိတျဓာတျရှိတယျ
တဈနမှေ့ာ ခမျြးသာလာနိုငျမယျ့ ပထမဆုံးလက်ခဏာတဈခုက အသကျငယျငယျကတညျး လုပျငနျးရှငျတဈယောကျရဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ ခံယူခကျြရှိခွငျးပါပဲ။ စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျးတဈဦးလညျးဖွဈး အားကစားအသငျးပိုငျရှငျလညျးဖွဈတဲ့ သနျးကွှယျသူဌေး တဈဦးဖွဈသူ Mark Cuban ဟာ အသကျ ၁၂ နှဈအရှယျမှာကတညျးက ရပျကှကျထဲမှာ တဈအိမျဆငျးတဈအိမျတကျ အမှိုကျအိတျတှေ လိုကျရောငျးခဲ့ဖူးပါတယျ။
ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု လုပျငနျးရှငျ ဘီလြံနာသူဌေးတဈဦးဖွဈတဲ့ Warren Buffett ဟာလညျး အသကျ ၆ နှဈအရှယျမှာ အိမျနီးခငျြးတှကေို ပီကလေိုကျရောကျးခဲ့ပွီး အသကျ ၁၁ နှဈမှာ ပထမဆုံး စတော့ရှယျယာရငျးနှီးမွုပျနှံမှုကို လုပျခဲ့ပါတယျ။
လက်ခဏာ (၂) – အဆောတလငျြလုပျဆောငျတတျတယျ
အမွငျ့မားဆုံး အောငျမွငျမှုရရှိသူတှဟော စိတျမရှညျတတျကွပါဘူး။ သူတို့အားလုံးမှာ အဆောတလငျြလုပျတတျတဲ့ ဉာဉျရှိကွပါတယျ။ သူတို့အတှကျ ဘဝက တိုတောငျးလှနျးလှပွီး အခြိနျမရှဆေို့ငျးတတျကွပါဘူး။ သူတို့ ဖွဈခငျြတာကို ခကျြခငျြးဆိုသလို ဖွဈအောငျ လုပျတတျကွပါတယျ။
နံရံတဈခုကို တှရေ့ငျ ပတျသှားမလား၊ အောကျကဖွတျသှားမလား၊ ကြျောတကျမလားဆိုတာကို ခကျြခငျြးစဉျးစားပွီး ခကျြခငျြးလကျတှလေု့ပျဆောငျတတျကွပါတယျ။ ဘယျလိုအတားအဆီးတှပေဲ ရှိရှိ အခြိနျဆှဲမနပေဲ ကြျောဖွတျနိုငျဖို့ ကွိုးစားတတျကွပါတယျ။ သငျလညျး ဒီလိုစိတျဓာတျမြိုးရှိရငျ တဈနေ့ ခမျြးသာအောငျမွငျမှာ သခြောပါတယျ။
လက်ခဏာ (၃) – ရညျမှနျးခကျြကို ဦးတညျထားတယျ
လူခမျြးသာတှကေ သူတို့ဘာလိုခငျြလဲဆိုတာ သခြောသိထားကွပါတယျ။ ဒီအပျေါမှာလညျး အာရုံအပွညျ့ စိုကျထားတတျကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှေ အစီအစဉျတှပေျေါမှာ ဆုံးဖွတျလုပျဆောငျတတျကွပွီး အနှောငျ့အယှကျမခံကွပါဘူး။ ဒီလိုပဲ သငျ့မှာလညျး အနာဂတျအစီအစဉျတဈခု ရှိထားမယျဆိုရငျ ခမျြးသာလာနိုငျခရြှေိပါတယျ။
ဘာအစီအစဉျမှာလညျး မရှိပဲ အခွားတဈယောကျအတှကျ အလုပျလုပျပေးနရေငျ ဘယျတော့မှ ခမျြးသာမလာနိုငျပါဘူး။ ဒီအခွအေနကေို သငျကလှဲပွီး ဘယျသူမှ မပွောငျးလဲနိုငျပါဘူး။
လက်ခဏာ (၄) – သငျ့ကိုယျသငျ အမွဲတိုးတကျအောငျ ကွိုးစားနတေယျ
ဒီအခကျြကလညျး သငျ့ကို တဈနေ့ အောငျမွငျကွီးပှားစမေယျ့ လက်ခဏာတဈခုပါပဲ။ လကျရှိအောငျမွငျခမျြးသာနသေူတိုငျးဟာ သူတို့ကိုယျသူတို့ တိုးတကျအောငျ အမွဲတမျး ကွိုးစားအားထုတျ လလေ့ာနကွေသူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့အားလုံး စာဖတျကွတယျ၊ အသဈအသဈတှကေို လလေ့ာသငျယူကွတယျ၊ အခြိနျတိုငျး တိုးတကျနဖေို့လုပျဆောငျတတျကွပါတယျ။
ဘဝမှာ အောငျမွငျကွီးပှားဖို့အတှကျ ဘယျအသကျအရှယျဖွဈနပေါစေ အရေးမကွီးပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျ ဖွဈဖွဈ ၊ ဆယျကြျောသကျတဈယောကျဖွဈဖွဈ အိမျထောငျရှငျကလေးအဖပေဲဖွဈနပေါစေ။
လုပျငနျးရှငျစိတျဓာတျရှိပွီး လုပျစရာရှိတောတှကေို ခကျြခငျြးလုပျတတျသူတဈယောကျဖွဈမယျဆိုရငျ ရညျမှနျးခကျြ ပနျးတိုငျကို ဦးတညျလုပျဆောငျတတျမယျဆိုရငျ တဈနမှေ့ာ ခမျြးသာကွှယျဝလာနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှေ တိုးတကျလာစဖေို့ အမွဲတမျးရငျးနှီးမွုပျနှံပွီး ရညျမှနျးခကျြကို အာရုံစိုကျထားဖို့ပဲ လိုပါတယျ။
သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ အရပ်အမောင်း၊ ဆံပင်အရောင်ကိုကြည့်ပြီး တစ်ချိန်ချိန်မှာ ချမ်းသာလာနိုင်မလား ခန့်မှန်လို့ ရမယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ကို ကြိုသိချင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာလာမှာလားဆိုတာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ကြည့်ရင်တော့ ချမ်းသာလာမလားဆိုတာ သိရနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တတ်သူတွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးသူတွေနဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်သဘောထားရှိသူတွေဟာ အောင်မြင်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြားလက္ခဏာ လေးခုရှိပါတယ်။ သင့်မှာ ဒီလက္ခဏာလေးခုရှိတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့မှာ ချမ်းသာလာဖို့ ခိုင်လုံတဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။
လက္ခဏာ (၁) – ငယ်ငယ်ကတည်းက လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်
တစ်နေ့မှာ ချမ်းသာလာနိုင်မယ့် ပထမဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုက အသက်ငယ်ငယ်ကတည်း လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ခံယူချက်ရှိခြင်းပါပဲ။ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်း အားကစားအသင်းပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး တစ်ဦးဖြစ်သူ Mark Cuban ဟာ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာကတည်းက ရပ်ကွက်ထဲမှာ တစ်အိမ်ဆင်းတစ်အိမ်တက် အမှိုက်အိတ်တွေ လိုက်ရောင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းရှင် ဘီလျံနာသူဌေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Warren Buffett ဟာလည်း အသက် ၆ နှစ်အရွယ်မှာ အိမ်နီးချင်းတွေကို ပီကေလိုက်ရောက်းခဲ့ပြီး အသက် ၁၁ နှစ်မှာ ပထမဆုံး စတော့ရှယ်ယာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက္ခဏာ (၂) – အဆောတလျင်လုပ်ဆောင်တတ်တယ်
အမြင့်မားဆုံး အောင်မြင်မှုရရှိသူတွေဟာ စိတ်မရှည်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့အားလုံးမှာ အဆောတလျင်လုပ်တတ်တဲ့ ဉာဉ်ရှိကြပါတယ်။ သူတို့အတွက် ဘဝက တိုတောင်းလွန်းလှပြီး အချိန်မရွှေ့ဆိုင်းတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ ဖြစ်ချင်တာကို ချက်ချင်းဆိုသလို ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
နံရံတစ်ခုကို တွေ့ရင် ပတ်သွားမလား၊ အောက်ကဖြတ်သွားမလား၊ ကျော်တက်မလားဆိုတာကို ချက်ချင်းစဉ်းစားပြီး ချက်ချင်းလက်တွေ့လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေပဲ ရှိရှိ အချိန်ဆွဲမနေပဲ ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ သင်လည်း ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင် တစ်နေ့ ချမ်းသာအောင်မြင်မှာ သေချာပါတယ်။
လက္ခဏာ (၃) – ရည်မှန်းချက်ကို ဦးတည်ထားတယ်
လူချမ်းသာတွေက သူတို့ဘာလိုချင်လဲဆိုတာ သေချာသိထားကြပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာလည်း အာရုံအပြည့် စိုက်ထားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အစီအစဉ်တွေပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်တတ်ကြပြီး အနှောင့်အယှက်မခံကြပါဘူး။ ဒီလိုပဲ သင့်မှာလည်း အနာဂတ်အစီအစဉ်တစ်ခု ရှိထားမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာလာနိုင်ချေရှိပါတယ်။
ဘာအစီအစဉ်မှာလည်း မရှိပဲ အခြားတစ်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေရင် ဘယ်တော့မှ ချမ်းသာမလာနိုင်ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကို သင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။
လက္ခဏာ (၄) – သင့်ကိုယ်သင် အမြဲတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေတယ်
ဒီအချက်ကလည်း သင့်ကို တစ်နေ့ အောင်မြင်ကြီးပွားစေမယ့် လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ လက်ရှိအောင်မြင်ချမ်းသာနေသူတိုင်းဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တိုးတက်အောင် အမြဲတမ်း ကြိုးစားအားထုတ် လေ့လာနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံး စာဖတ်ကြတယ်၊ အသစ်အသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူကြတယ်၊ အချိန်တိုင်း တိုးတက်နေဖို့လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။
ဘဝမှာ အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက် ဘယ်အသက်အရွယ်ဖြစ်နေပါစေ အရေးမကြီးပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရှင်ကလေးအဖေပဲဖြစ်နေပါစေ။
လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိပြီး လုပ်စရာရှိတောတွေကို ချက်ချင်းလုပ်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ဦးတည်လုပ်ဆောင်တတ်မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့မှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာစေဖို့ အမြဲတမ်းရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ရည်မှန်းချက်ကို အာရုံစိုက်ထားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ထမင်းစားရင်း ပါရမီဖြည့်မယ် ထမင်းစားရင် ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုလို့ ကြားရတော့ဘာလဲပေါ့နော်။ ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်ခဲ့ဘူး၊ ဟိုနေ့ကမှဖတ်ရတဲ့စာအုပ် လေးကြောင့်သိလိုက်ရတဲ့ ကုသိုလ်ကမနည်းပါလားဆိုပြီး နောင်တရခဲ့ပါတယ်။ အကုန်ရေးရင်ရှည်နေလိမ့်မယ် စာဖတ်သူတို့နားလည်အောင်နဲ့ မြန်မြန်သိနိုင်အောင်အတိုချုပ်ပြီ ကောက်နုတ်တင်ပြပေးပါမယ်။ ထမင်းစားရာမှာ…….. ၁။ သီလနဲ့စားသုံးခြင်း ၂။ သမထနဲ့စားသုံးခြင်း ၃။ ဝိပဿနာနဲ့စားသုံးခြင်း ဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိတယ်။ ၁။ သီလနဲ့စားသုံးခြင်း ဆွမ်းစားခါနီးမှာ “ဒီဆွမ်းဘောဇဉ်တွေကို မြူးထူး ပျော်ပါးဖို့၊ အသားအရေ လှပတင့်တယ်ဖို့ စားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကာယ အရှည်တည်တံ့ဖို့၊ မဂ်ဖိုလ်အကျင့်ကို ကျင့်နိုင်ဖို့၊ ဝိပဿနာတရားကို ကျင့်နိုင်ဖို့ စားတာ”လို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင် ပစ္စယသန္နိဿိတသီလ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဆိုသီလနဲ့စားလိုက်တာပါ၊ သီလကုသိုလ်တွေ ရသွားတာပေါ့။ ၂။ သမထနဲ့စားသုံးခြင်း ရိပ်သာမှာတော့ “ဤသည့်စားဖွယ် အမည်မည်ကို”ဆိုပြီး စားကြတာပါ။ …
လှကေားထဈ အရအေတှကျ မ ဂဏနျး ဘာကွောငျ့ ထားကွပါလဲ
လှကေားထဈ အရအေတှကျ မ ဂဏနျး ဘာကွောငျ့ ထားကွပါလဲ လှကေားထဈ အရအေတှကျ စုံ မထားရလို့ ကွားဖူးကွမှာပါ။ လှကေားထဈ အရအေတှကျ စုံထားရငျ ခိုကျတတျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ခိုကျလဲဆိုတာ က လူ့သဘာဝကွောငျ့ပါ။ လူဆိုတာ ကိုယျစလှမျးတဲ့ ခွနေဲ့ ခွလှေမျး ပွနျ‌ဆုံးတတျပါတယျ။ ဥပမာ ညာခွနေဲ့ စလှမျးရငျ ညာခွဆေီ ဘယျခွလောပွီး အဆုံးသတျပါတယျ။ ညာနဲ့စရငျ ညာနဲ့ ဆုံးပါတယျ။ အဲဒီလိုပဲ ဘယျနဲ့စရငျ ဘယျနဲ့ ဆုံးပါတယျ။ မယုံရငျ ကိုယျ့ဘာသာ တမငျသကျသကျ လုပျမယူပဲ လှမျးကွညျ့ပါ။ ညာနဲ့စ ညာနဲ့ဆုံးလို့ ခွလှေမျးရေ အရအေတှကျက မ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျနဲ့စလဲ အတူတူပါပဲ။ …
ဖုနျးသုံးသူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ဖုနျးလေးလံခွငျးကို ဖွရှေငျးပေးနိုငျမယျ့ အခကျြမြား
ဖုနျးသုံးသူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ဖုနျးလေးလံခွငျးကို ဖွရှေငျးပေးနိုငျမယျ့ အခကျြမြား ၁. နရောလှတျပွညျ့နခွေငျး Storage 16GB လောကျကို 500MB လောကျပဲ ကနျြအောငျ ပွှတျသိပျသှငျးထားမယျဆိုရငျတော့ သငျ့ဖုနျးလေးလံလာမှာအမှနျပါပဲ။ ဖုနျးထဲမှာ ရှိနတေဲ့ App cache တှကေလညျး နရောအမြားကွီးယူပါတယျ။ ဒီတော့ အသုံးမလိုတဲ့ App တှကေိုဖကျြပဈပါ။ Junk File တှေ Cache file တှကေို နစေ့ဉျ ဖုနျးမှာ နဂိုပာဝငျတဲ့ Cleaner နဲ့ရှငျးလငျးပေးပါ။ ၂. Live wallpaper Live wallpaper တှဟော background မှာ အစဉျအမွဲအလုပျလုပျနတောဖွဈတဲ့အတှကျ Ram ထဲမှာ တဈခြိနျလုံးနရောယူထားပွီး ဘတ်တရီကိုလညျး အခြိနျနဲ့အမြှစားသုံးနပေါတယျ။ ဒီတော့ …